Eleven media: အမှန်တရားဆိုတာ ~ Rohingya Blogger
Roit News, ရိုဟင်ဂျာသတင်း, မြန်မာသတင်း
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်နေခဲ့တာတွေထဲက အကြောင်းတစ်ခုကတော့ တော်တော်လေး မသင့်မြတ်ဘူး ထင်လို့ ဒီစာရေးတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဂျာနယ်လစ်နဲ့ ကျင့်ဝတ်(၃)ဆိုပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က weekly eleven စာ ၂၆ မှာပါလာပါတယ်။ “ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုးခြင်းကြားမှာ ၊ အမှန်နဲ့အမှားကြားမှာ၊ ဖိနှိပ်သူနဲ့ အဖိနှိပ်ခံကြားမှာ ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဟာ ကြားနေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြားနေမှုက အမှန်တရားလောက်အရေးမပါဘူးဆိုတာကို ထင်သာမြင်သာအောင် ထုတ်နုတ်ပြထားပါတယ်။” တဲ့ဗျာ။ အဲ-ရည်ညွှန်းမှာတော့ Ethnics for Journalists (2nd Edition) by Richard Keeble ကို ပေးထားပါတယ်။
Out of Contextလိုသလောက်ဖြတ်ယူပြီးကိုယ့်သဘောနဲ့ထပ်တူဖြစ်အောင်လုပ်ယူဖော်ပြထားတာမျိုးတွေပါ။ ခုဆောင်းပါးမှာတော့ အဲဒီကိစ္စအကျယ်မပြောတော့ပါဘူး။ လိုရင်းကိုပဲ သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ အဲ- ကြားနေမှုက အမှန်တရားလောက်အရေးမပါဆိုတာလေးတော့ မှတ်ထားပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ပါရစေ။
လိုရင်းကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရှိမရှိနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ဖြေကြားချက်ကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ မီဒီယာကြီးက စာဖတ်ပရိသတ်ကို ဖြစ်သလို သဘောထား၊ လိုသလို ၀ိသေသပြုပြီး အလိုကျအသုံးတော်ခံခိုင်းခဲ့ပုံပါ။
ဒီနေရာမှာ လုံးဝကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားစေလိုတာက ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာကို ကိုယ်စားမပြု သလို ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆောင်ရွက်နေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတာပါ။
ဒါက အော်စလိုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြေသွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံသားပြုခွင့် ရှိနိုင်မရှိနိုင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့အဖြေ ဗွီဒီယိုဖိုင်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖြေကို ၁၆း၁၀ လောက်ကနေ စကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်းမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဒီရိုဟင်ဂျာပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် စားထိုးအဖြေအသစ်တစ်ခု ရဖို့ မေးတာပါလို့ လည်း ပြောသွားပါတယ်။
I spoke for rule of law. And rule of law covers rules of citizenship as well. This is what I mean by saying the root of the problem is lack of rule of law. We are not certain exactly what the requirements of citizenship laws are. I will mention one particular case of one of our candidates for the last by-election who was disqualified because in accordance with the election regulations, all candidates have to be born of nationals, both parents must be nationals. This candidate of ours, his parents, both of them are Burmese nationals when he was born. But later, his father took another nationality. And on those grounds, he was disqualified asacandidate. ….. Even with regard to citizenship we are not clear what the laws really are. Rule of law, if you have very clear as to who are the citizens of the country under the citizenship laws and who qualified, then there would not be this problem which is always coming up there is an accusation, some people do not belong in Bangladesh and some people do not belong in Burma. Bangladesh says that they are not ours and Burma says that they are not ours and these poor people get shuffled around. So we have to have rule of law, we have to know what the law is. We have to make sure that it is properly implemented.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကနဦးမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက အဓိက အရင်းအမြစ်ပဲဆိုတာကို ထိမိရိုးရှင်းစွာ ဖြေကြားခဲ့တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေကို မြန်မာမှုပြုရရင် -
“ကျမ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြောင်း ပြောခဲ့တယ်။ ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထဲမှာပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေကလည်း အကျုံးဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ကျမဆိုလိုတာပါ။ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိခြင်းဥပဒေမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာ ကျမတို့ တိကျသေချာခြင်း မရှိသေးဘူး။ (တနည်း – နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ဖို့ ဥပဒေထဲမှာ ဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုတာ ဂဃနဏပြဌာန်းထားခြင်းမရှိသေးဘူး။) ”…. အဲဒီနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အန်အလ်ဒီကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် အပယ်ခံခဲ့ရတာကို ဥပမာပေးပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်က မွေးတုန်းကတော့ အဖေရော အမေရော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ- နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တခြားနိုင်ငံသားခံယူသွားတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို ပယ်ခဲ့တာပါ။ ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခွင့် ဥပဒေမှာကျ ဖခင်ရော မိခင်ပါ နိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။ …………
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်လက်ဖြေကြားတာက “နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိခြင်းကိစ္စမှာတောင် ကျမတို့ဟာ ဥပဒေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ မရှင်းလင်းသေးပါဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိရေးဥပဒေအောက်မှာ ဘယ်သူတွေကတော့ဖြင့် နိုင်ငံသားတွေ၊ ဘယ်သူတွေကတော့ဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်းမီသူတွေဆိုတာ အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်နေရပါမယ်။ ဒါမှသာ ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေ ရှိမလာမှာပါ။ (ပြဿနာဆိုတာမှာ) ဒီစွပ်စွဲမှုက အမြဲတမ်းဘယ်လို တက်လာသလဲဆိုတော့ တချို့ကိုတော့ဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး၊ တချို့ကိုတော့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး (တနည်း တချို့ကတော့ဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး၊ တချို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး) ဆိုပြီးတော့ပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း ဒီလူတွေက ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာဘက်ကလည်း ဒီလူတွေက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူး ဆိုပြီးပြောနေကြတော့ ဒီသနားစရာကောင်းတဲ့လူစုက ဟိုဘက်ပြေးလိုက် ဒီဘက်ပြေးလိုက်ဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမတို့က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိရမယ်၊ တရားဥပဒေဆိုတာ ဘာလဲဆိုပြီးသိရမယ်။ ဒီဥပဒေကို စနစ်ကျစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်အောင် အသေအချာဆောင်ရွက်ရမယ်။”
အထက်ပါအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားတဲ့အခါ မေးခွန်းမေးသူ အမေရိကန် ရုပ်သံဌာနတစ်ခုရဲ့ ရီပိုတာဖြစ်သူက ဆက်ပြီး အထွန့်တက်ပါတယ်။
What should it be with regarding to the citizenship? Are they or they are not?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံး ပြောခဲ့တဲ့အဖြေက -
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ စာဖတ်သူကို လုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားစေဖို့ အမေးအဖြေကို ဒုတိယမ္ပိ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
အမေး – What should it be with regard to the citizenship? Are they or they are not?
သူတို့က နိုင်ငံသားဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်နဲ့ စပ်လျဥ်းပြီး ဘယ်လိုမျိုးပါသလဲ။ သူတို့က (နိုင်ငံသား)လား (နိုင်ငံသား)မဟုတ်ဘူးလား။
အဖြေ – I do not know.
ဆက်လက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြေကြားတာက -
I do not know because when you talk about the Rohingya, we are not quite sure who you are talking about. As I said there isaproblem about who we are referring to. There is someone who says that those people who claim to be Rohingyas are not the ones who are actually native to Burma. But who are just come over recently from Bangladesh. But, on the other hand, Bangladesh says No. They don’t want them as refugees because they are not native to Bangladesh and they come over from Burma. So how do we sort this out without “RULE OF LAW”, without proper Immigration Processes, without proper policy, without properly implementation of laws. This is why I said the root of all is “The RULE OF LAW” going back to many decades, not going back just to the crime that is just committedacouple of months ago.
မြန်မာပြန် – ကျမ မသိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းပြောတဲ့အခါ ကျမတို့ ဘယ်သူတွေအကြောင်း ခင်ဗျားပြောနေသလဲဆိုတာ တော်တော်ကလေး မသေမချာဖြစ်နေပါတယ်။ ကျမပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ ကျမတို့ ဘယ်သူတွေကို ရည်ညွှန်းနေသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ ပြဿနာရှိနေပါတယ်။ တချို့က ရိုဟင်ဂျာလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောနေကြသူတွေဟာတော့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်လို့ ဆိုကြတယ်၊ သူတို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကနေ မကြာသေးမီကမှ ရောက်လာကြသူတွေလို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တဘက်မှာတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ကို ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ (ကျနော်တို့) လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ (ရိုဟင်ဂျာ)တွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့က မြန်မာဘက်က လာကြသူတွေလို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိဘဲ ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စတွေ စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ စနစ်ကျတဲ့ ပေါ်လစီမရှိဘဲ၊ ဥပဒေကို စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမရှိဘဲ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လို ရှင်းထုတ်မလဲ။ ဒါကြောင့် ကျမက ဒီကိစ္စအားလုံးရဲ့ အရင်းအမြစ်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ ပြောခဲ့တာပါ။ ဒါကလည်း ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းက (ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်က ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်တဲ့ (ပြဿနာ) ကနေ စလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။
ကဲအခု ပထမအဖြေနဲ့ တဆက်တည်းလာတဲ့ ဒုတိယအဖြေ။ ပထမအဖြေကို သဘောမကျတဲ့ မေးခွန်းထုတ်သူက ဆက်မေးတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြေတဲ့ ဒုတိယအဖြေကို Out of context လုပ်ပြီး သဘောကျဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ အလွဲကြီးလွဲပါပြီ။
အလဲဗင်းဂရုမြန်မာပြန်တာက ဒုတိယအဖြေတစ်ခုတည်းကို ကွက်ပြီးပြန်ထားတာပါ။ ပြန်ထားတော့လည်းဗျာ။ ဒီိလိုဖြစ်နေပါတယ်။
“ရှင်ပြောတဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျမ မသိဘူး။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတာကို ရှင်ပြောသလဲဆိုတာ ကျမတို့ သေသေချာချာ မသိဘူး။ ကျမပြောခဲ့သလိုပဲ ဘယ်သူ့ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုသလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာ ရှိနေတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကနေ မကြာသေးခင်ကမှ ရောက်လာသူတွေလို့ တချို့က ပြောဆိုကြတယ်။”
“who you are talking about” ဆိုတာနဲ့ “we don’t know who they are” ဆိုတာ လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။
အလဲဗင်းမီဒီယာဂရုခင်ဗျား။ ခင်ဗျားတို့ဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ စကားလုံးများရဲ့ မူရင်းက ဒီလိုပါ။
Ido not know because when you talk about the Rohingya, we are not quite sure who you are talking about. As I said there isaproblem about who we are referring to. There is someone who says that those people who claim to be Rohingyas are not the ones who are actually native to Burma.But who are just come over recently from Bangladesh.
အဓိပ္ပါယ်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပါပဲ။ “ပထမ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဥပဒေကသာ ဘယ်သူကတော့ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ဘယ်သူကတော့ဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အရည်အချင်းမီတယ်စသဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မယ်။ အဲသလိုဖြေတယ်၊ ဒါကို မေးခွန်းမေးသူက ရိုဟင်ဂျာက နိုင်ငံသားဟုတ်လားမဟုတ်လားထပ်မေးတယ်။ ဒီအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျမမသိဘူး၊ ခင်ဗျားပြောတဲ့ရိုဟင်ဂျာကို ဘယ်ဥပဒေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်ငံသားဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မလဲ၊ သူမှန်တယ်၊ ငါမှန်တယ်ဆိုပြီး တဖက်တမျိုးစီ ပြောနေကြတာပဲ၊ ဒါကြောင့်ကျမက အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ဥပဒေရှိဖို့၊ စိုးမိုးဖို့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဏ္ဍတွေ စနစ်ကျဖို့က အဓိကပါလို့ ပြောခဲ့တာပေါ့” လို့ ဖြေကြားပါတယ်။
ဒီလိုရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင် လှည့်စားတဲ့ မီဒီယာကြီးခင်ဗျား။ အမှန်တရားဆိုတာ ကြားမနေလဲရပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့မီဒီယာကြီးခင်ဗျား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ချပြခဲ့တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ လက်ရှိတရားဥပဒေကိစ္စတွေကို မီဒီယာကြီးအနေနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကို ချပြပေးခဲ့ဖူးပါသလား။ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ချပြပေးဖူးပါသလဲ။ကဲအခု၊ အထက်မှာ ကျနော်ပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုးကိုသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုခဲ့တာပါဆိုတာကို ပိုမိုခိုင်မာစေဖို့ လန်ဒန် စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး တက္ကသိုလ် (London school of economics and politics) မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့
ဒီဘိတ်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဘယ်လိုပြောဆိုဆွေးနွေးသွားသလဲဆိုတာက အနည်းငယ်သုံးသပ်ပါမယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အတွက် procedure နဲ့ transitions အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ – Burma law is obsolete. မြန်မာ့ဥပဒေက ဒိတ်အောက်နေပြီလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားခဲ့တာကတော့ မှတ်သားစရာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က Statelessness in Burma ၊ မြန်မာပြည်က နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲ ယောင်ခြောက်ဆယ်ဖြစ်သူများအတွက် We can base in rule of Law ၊ ကျမတို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အခြေခံနိုင်တယ်၊ ဒီလိုအခြေခံတဲ့နေရာမှာ Two aspects ၊ ရှုထောင့်နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
1) The law of citizenship. What are the citizenship laws in Burma like? Are these just? Are these in line with internationally acceptable standard? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
မြန်မာပြည်က နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိခြင်းဥပဒေက ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။ အဲဒီဥပဒေက တရားမျှတရဲ့လား၊ ဒီဥပဒေက နိုင်ငံတကာက လက်ခံနိုင်မယ့် စံပုံဆန်တွေနဲ့ရော ကိုက်ညီနေလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
အဲ နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတာက procedural ပါ။ ဘိုလိုကတော့ အကြမ်းဖျင်း ဒီလိုမျိုးပါ။ How do the immigration authorities work? How do the police work? How do the court work?
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ၊ ရဲတွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေပါသလဲ၊ တရားရုံးတွေ ဘယ်လိုအလုပ် လုပ်နေပါသလဲ။ (ဒါတွေက procedural တွေပါတဲ့)
These two are essential to find why stateless persons are stateless. Whether there is not something that can be done to assure the position within the rule of law.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါ အချက် ၂ ချက်ကတော့ နိုင်ငံမဲ့နေသူတွေ ဘာကြောင့် နိုင်ငံမဲ့နေသလဲဆိုတာ ရှာဖွေဖို့ အဓိကနည်းလမ်း ၂ သွယ်ပါလို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက် ၂ ချက်ကို အခြေခံခြင်းဖြင့် (ဒီနိုင်ငံမဲ့နေသူများ) အတွက် အခြေအနေတစ်ခုကို တရားဥပဒေအတွင်းမှာပဲ တိကျသေချာစွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးဖို့ (ဥပဒေ အမျိုးအစားတစ်ခု) ရှိမနေဘူးလားဆိုတာကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ဗျား။ ကောက်ချက်ကတော့ ဒီလိုချပါတယ်။ အလဲဗင်းမီဒီယာက ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးရှင်များအနေနဲ့ ဒီလို out of context လုပ်တာကတော့ အမှန်တရားကနေ သွေဖယ်ပြီး ပြည်သူကို လှည့်စားတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။ တခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။
ဗွီဒီယိုဖိုင်များကို အသေအချာနားသောတဆင်ကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီစာမရေးမီ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကို အနည်းဆုံး ၃ ခေါက်ထပ်မနည်း နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ တခြားတတ်ကျွမ်းသူများဆီကလည်း သဘောထား မေးမြန်းခဲ့ ပါတယ်။ အလဲဗင်းမီဒီယာက ဒီလင့်ခ် ကို တင်အပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ ဒီလို ဖြုတ်ချပြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒါနဲ့ မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အမှန်တရားလိုလားသူအချို့က ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ပြီး ကျနော့်ဆီ ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က အလဲဗင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး ဘာလို့ အထက်ပါလင့်ခ်ကို ဖျက်ချရသလဲဆိုတာ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်တဲ့။ (ပုံမှ Article #14161 not found ဆိုသည့်စာသားအား သတိပြုကြပါ)
အဲ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာလေတော့ အထက်ပါလင့်က ပြန်ပြီး အလုပ်လုပ်လာပါတယ်။ အခုလက်ရှိလည်း အဲဒိလင့်ခ်က အလုပ်လုပ်တုန်းပါ။
Link address ကတော့
ဒီတော့ဗျား။ ကျွန်တော်လေ့လာဖူးတဲ့ The most successful propaganda technique ဆိုတာလေး ကြုံကြိုက်တုန်း တင်ပြပါရစေ။ မူရင်းကတော့ ဒီမှာပါ။ နံပါတ် ၃ မှာ ပြောထားတာက
သက်ပြင်းရှည်ကြီးပဲ ချမိပါတယ်ဗျား။(အင်္ဂလိပ်လိုပဲ နားလည်တော်မူကြပါကုန်) ဒီတော့ဗျား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အဖြေက မြန်မာ့လက်ရှိ ဥပဒေသည် နိုင်ငံတကာစံချိန်တွေနဲ့ မကိုက်ညီဘဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်၊ မည်သူသည်နိုင်ငံသား၊ မည်သူသည်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဆိုတာတောင် မခွဲခြားပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသာ conclude လုပ် ယူနိုင်ပါတယ်။ အလဲဗင်းကြီးပြောသလို “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရိုဟင်ဂျာသည် နိုင်ငံသားမဟုတ်” ဆိုပြီး ဒဲ့ပြောလိုက်သလိုလို ဘာလိုလိုညာလိုလို conclude လုပ်လို့လုံးဝမရပါ။
ဒါကို မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ် (အင်္ဂလိပ်နားမလည်ကြတဲ့) က သဘောမပေါက်နိုင်ပဲ အလဲဗင်းပေ့ခ်ျမှာ ဟာ.. အမေစုက ပြောလိုက်ပီဟေ့ စသဖြင့် ကွန်မန့်တွေရေးကြတာ အဓိက misinform လုပ်ထားတဲ့ အလဲဗင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ – အလဲဗင်းမီဒီယာအုပ်စုခင်ဗျား။ နောင်ကြီးတို့မှာ အမှန်တရားဆိုတာကို ထူးထူးခြားခြားလေးများ Define လုပ်ထားရင် ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ဗဟုသုတအဖြစ် ဝေမျှပေးပါလို့ ရိုးသားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
sex24 June 2012 10:51မျီုးမြတ်ထွန်းရေးbuddish ဘင်္ဂါလီတွေအများကြီးဘဲ၊ဟိုဘက်ကလာပြီးတိုင်း၇င်သာအရေးခြုံပြိးတော်လွှတ်တော်ထဲတောင်ရောက်နေကြ ပြီး။ReplyDeleteAdd commentLoad more...